शव्दहीन....... ~ brazesh
September 06, 2015 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
बायाँ फन्को १६४
सामान्यतया पहिलो पटक केही लेख्दा जुन उत्साह अनुभव भएको थियो, हरेक पटक त्यही उत्साहको केही अंश अहिले पनि लेख्दा अनुभव भैरहेको हुन्छ । अनि आफूले लेखेको कुरा प्रकाशित हुने दिन एकाबिहानै त्यो छापिएको पत्रिका खोज्न हान्निने उत्साह सामान्यतया अझै पनि उस्तै नै हुन्छ । तर यसपटक लेख्न बस्दा लेख्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ । एउटा लेखकको जीवनमा लेख्न बस्दा यसरी हात लूलो हुने सम्भवतः धेरै कम अवसरहरु हुन्छन् होला जस्तो लाग्छ । लेख्नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने त अझ दुर्लभ हुन्छ होला ।
अघिल्लो हप्ता कैलालीको टीकापुरमा भएको अकल्पनीय दुर्घटनाको समाचार सुनेको बेलादेखि नै मथिंगल हल्लिएको छ । हुन त विगत केही समयदेखि हामीले राम्रा भन्दा नराम्रा कुराहरु मात्र धेरै सुन्न परिरहेको छ । नराम्रा समाचारहरु र तिनले मगजमा पार्ने प्रभाव पनि लौ त भनौं भने अभ्यस्त हुँदै जाने कुरा हुँदो रहेछ । असर नपर्ने होइन, असरको पीडा कम हुने वा त्यसलाई सहने क्षमता बढ्दै जाने मानिसको शक्ति उसको लागि वरदान नै होला । अनि रात जति कालो र गाढा हुँदै गयो, बिहानी त्यति नै नजीक छ भनेर आशावादी मानिसहरु आफूलाई संयमित बनाउने गर्छन् । तर पनि टीकापुरको त्यो घटनाले खराब समाचार सहने शक्तिका अग्ला मोटा पहाडहरुलाई ग्वार्लाम्गुर्लुम्मै पारेर धराशायी बनाइदिएको छ । आहत भएका छौं हामी सबै, मर्माहत भएका छौं । बोल्नका लागि शव्दहरु अचानक कम भएका छन् ।
हुनै नहुने कुरा भएको छ । किन यस्तो भयो ? मार्ने र मारिने दुबै आफ्नै थिए । हामीमा विरोधाभाषहरु होलान्, हाम्रा आआफ्नै मूल्य र मान्यता होलान् । हाम्रा आआफ्ना असन्तुष्टिहरु हुन सक्छन् । तर ती कुनै पनि त्यति हिंश्रक र अमानवीय रुपमा प्रकट हुनुपर्ने खालका चाहिँ छैनन् । तर अब हामीले जे भइसक्यो त्यसलाई जति चाहेर पनि फेर्न कहाँ सक्छौं र ? केही घाउ यस्ता हुन्छन्, जसको खत आजन्म रहिरहन्छ । यसको पनि रहन्छ । पक्ष विपक्ष, कारण, एकार्कामाथि दोषारोपणका श्रृँखलाहरु त शुरु हुने नै भए । तर जे जसो भए पनि त्यहाँ भएको घटनालाई जष्टिफाइ गर्ने कुनै पनि कुरा हुनै सक्दैन । ओशोले पनि गीतादर्शनमा भनेका छन्, हिंसा खराब हो तर कुनै कारणले जष्टिफाइ गर्न खोजिने हिंसा त झन् सबैभन्न्दा खराब हो । त्यसैले पनि टीकापुरमा भएको त्यो अमानवीय कार्यलाई कसैले कुनै हिसाबले पनि जष्टिफाइ गर्न सक्दैन, गर्ने प्रयास पनि गर्नु हुँदैन । तर हिंसाको समाधान प्रतिहिंसाले कहिले पनि गर्न सक्दैन । तसर्थ केही मानिसहरु अमानव भएको दोष कुनै वर्ग वा समुदायलाई लगाउने काम पनि हुनुहुँदैन । त्यसो भयो भने विभिन्न कुत्सित मनाशय साध्नेहरुको जीत हुन सक्छ ।
यहाँ नेर गम्भीर प्रश्न एउटै हो, मानिस किन त्यति हिंश्रक हुनसक्छ ? कसैको पनि ज्यान लिने अधिकार कुनै अर्को मानिसलाई छैन । विवादको समाधानका लागि अरु धेरै बाटाहरु पहिल्याउन सक्ने भएर न हामी मानिस भएका हौं । बलको आधारमा, हिंसाको आधारमा र अरुलाई मारेर आफूले जितेको ठान्ने स्वभाव मानिसको हुँदै होइन । त्यसैले हामीले आफू मानिस हौं भन्ने कुरालाई कहिले पनि भुल्नु हुँदैन । मानिस सृष्टिको सर्वोत्तम सिर्जना हो । त्यसैले त विवेक भन्ने कुरा प्रकृतिले हामीमा मात्र भरिदिएको गुण हो । यसको अवमूल्यन गर्ने वा यसलाई बिसैने कार्य कुनै पनि मानिसले गर्नु हुँदैन । तर पनि सबै कुरा थाहा भएको यो उच्चकोटिको प्राणीले बेलाबेला आफूलाई नसुहाउने यस्ता कार्यहरु गरेको बेला आफू पनि मानिस हूँ भन्ने सम्झन पनि दिक्दार लाग्छ ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको यस्तो फेरि कुनै पनि बहानामा वा कुनै पनि कारणले नहोस् भन्ने बातावरण बनोस् भन्ने हो । कुनै पनि जाती वा समुदायलाई उद्वेलित बनाएर, हामीलाई एकआपसमा लडाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न चाहनेहरुलाई असफल बनाउनु हामी सबैको एउटै मात्र ध्येय हुनुपर्छ । भएको घटनालाई अतिरञ्जित बनाउने र अझै बढी आक्रामक बनाउने सोच, अभिव्यक्ति वा क्रियापलापहरु हुन दिनु हुँदैन । यस तर्फ सबै सचेत हुनु आवश्यक छ । हामी सबै एकै आमाका छोराछोरी हौं भन्ने सानो कुरा मात्र हामीले नबिर्सिदिए पुग्छ, नबिर्सौं ।